Nyaya Youpenyu: Zvinhu Zvikuru Zvandaita Mubasa roUmambo | Yokudzidza
Zvinhu Zvikuru Zvandaita Mubasa roUmambo
Yakataurwa naMildred Olson
Mumwe musi mugore ra1947, vapristi vechechi yeRoma vemuSanta Ana, kuEl Salvador, vakada kutyisidzira Zvapupu. Hama padzakanga dzichiita chidzidzo chevhiki nevhiki cheNharireyomurindi, vamwe vakomana vakakanda matombo mahombe nepadhoo remba yaigara mamishinari. Zvadaro kwakabva kwauya gurumwandira rakanga richitungamirirwa nevapristi. Vamwe vaiva muboka iri vaiva nematochi; vamwe vakatakura zvifananidzo. Vakaita maawa maviri vachingotema imba yacho nematombo vachishevedzera vachiti: “Mhandara [Maria] ngairarame nekusingaperi!” uye “Jehovha ngaafe!” Vaida kutyisidzira mamishinari kuti atize muguta iri. Ndinozviziva izvozvo nokuti ndaivawo mumishinari uye ndaivapo pamusangano iwoyo wakaitwa makore 67 adarika. *
MAKORE maviri izvi zvisati zvaitika, ini naEvelyn Trabert, wandaishanda naye mubasa reumishinari, takanga tapedza zvidzidzo zvedu mukirasi yechina yeChikoro cheBhaibheri cheWatchtower cheGiriyedhi, icho chaiitwa pedyo neIthaca, New York. Takanzi tiende kunoshumira kuSanta Ana. Asi ndisati ndaenderera mberi nekukuudzai zvishoma nezvemakore angasvika 29 andakaita mubasa reumishinari, regai ndimbokuudzai chakaita kuti ndizosarudza kuita basa iri.
NHAKA YANGU PANYAYA YEZVEKUNAMATA
Ndakaberekwa muna 1923. Vabereki vangu John naEva Olson, vaigara muSpokane, Washington, U.S.A. Vaipinda chechi yeLutheran asi vakanga vasingatendi dzidziso yechechi iyi yekuti vanhu vanonotsva muhero, sezvo vakaona isingapindirane nezvavaitenda zvekuti Mwari ane rudo. (1 Joh. 4:8) Baba vaishanda pabhekari, uye mamwe manheru, mumwe munhu wavaishanda naye akavaudza kuti Bhaibheri haridzidzise kuti hero inzvimbo inotambudzirwa vanhu. Pasina nguva vabereki vangu vakatanga kudzidza neZvapupu zvaJehovha uye vakadzidza zvinonyatsodzidziswa neBhaibheri pamusoro pekuti kana munhu afa chii chinenge chaitika.
Ndaingova nemakore 9, asi ndinoyeuka ndichinzwa vabereki vangu vachitaura nemufaro nezvechokwadi cheBhaibheri chavakanga vachangowana. Chido chavo chakatowedzera kukura pavakaziva zita raMwari wechokwadi, Jehovha, uye pavakasunungurwa padzidziso isinganzwisisiki yeUtatu. Kufanana nechipanji chinonwiririra mvura, ndakatanga kunwiririra dzidziso idzodzo dzinonakidza dzeMagwaro, ndichidzidza ‘chokwadi chinosunungura.’ (Joh. 8:32) Saka handina kumbobvira ndafinhikana nekudzidza Bhaibheri, asi ndinotonakidzwa nekuongorora Shoko raMwari. Ndaienda nevabereki vangu mubasa rekuparidza kunyange zvazvo ndainyara. Vakabhabhatidzwa muna 1934. Muna 1939, ndava nemakore 16, ndakabhabhatidzwawo semushumiri waJehovha.
Ndiine vabereki vangu pagungano muSt. Louis, Missouri muna 1941
Muna July 1940, vabereki vangu vakatengesa imba yavo, uye tose tiri vatatu takabva tatanga basa renguva yakazara rekupayona muCoeur d’Alene, Idaho. Taigara mufurati ratairenda raiva pamusoro pegaraji. Taiitirawo misangano mufurati iri. Panguva iyi, ungano shomanana chete ndidzo dzaiva neDzimba dzoUmambo, saka vanhu vaitopindira misangano mudzimba dzavo kana kuti dzimba dzekurenda.
Muna 1941 ndakapinda gungano nevabereki vangu kuSt. Louis, Missouri. Musi weSvondo wakanzi waiva “Zuva Revana,” uye vaya vaiva nemakore ari pakati pe5 ne18 vakagara pamberi pechikuva. Hama Joseph F. Rutherford pavakanga vava kupedza hurukuro yavo, vakataura nesu vechiduku vachiti: ‘Vana vose vakasarudza kuteerera Mwari naMambo wake, simukai!’ Tose takabva tasimuka. Hama Rutherford vakabva vati: “Tarirai, zvapupu zvitsva zveUmambo zvinopfuura 15 000!” Izvi zvakaita kuti ndinyatsosimba pachisarudzo chekuti ndipayone kweupenyu hwangu hwose.
KWAKASHANDIRA MHURI YEDU
Mwedzi mishomanana gungano rekuSt. Louis rapera, mhuri yedu yakatamira kuchamhembe kweCalifornia. Takanga tatumwa kunotanga ungano muguta reOxnard. Taigara mukaravhani diki yaingova nemubhedha mumwe chete. Ini ndaitowaridzirwa pamusoro petafura manheru ega ega, kusiyana nezvandakanga ndajaira zvekurara muimba yangu ndega.
Tava kuda kusvika kuCalifornia, Japan yakabva yabhomba Pearl Harbor kuHawaii, musi wa7 December, 1941. Zuva rakatevera racho, United States yakabva yapinda muHondo Yenyika Yechipiri. Vakuru venzvimbo iyi vakagadza mutemo wokuti zviedza zvose zvidzimwe usiku. Ngarava dzinofamba pasi pemvura dzekuJapan dzaigara dzichiongorora mahombekombe eCalifornia, saka kudzima mwenje kwaizoita kuti vasaona nzvimbo dzekubhomba.
Papera mwedzi yakati kuti, muna September 1942, takapinda Gungano reNyika Itsva Rokutonga Kunoitwa naMwari muCleveland, Ohio. Takateerera Hama Nathan H. Knorr vachipa hurukuro yaiti “Runyararo—Rucharamba Ruriko Here?” Vakatsanangura chitsauko 17 chaZvakazarurwa, chinotaura kuti “chikara chakanga chiripo, asi hachisisipo, asi zvino chava kuda kubuda mugomba rakadzikadzika.” (Zvak. 17:8, 11) Hama Knorr vakatsanangura kuti “chikara” chaiva Sangano Renyika Dzakabatana (League of Nations) iro rakanga raparara muna 1939. Bhaibheri rakanga rataura kuti sangano iri raizotsiviwa, zvoita kuti panyika patombova nekarunyararo. Saka zvakabva zvaitika kuti muna 1945, pakapera Hondo Yenyika Yechipiri, “chikara” chakamukazve chava Sangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose. Zvapupu zvaJehovha zvakabva zvawedzera basa razvo rekuparidza munyika yose, uye kubvira ipapo vanhu vanga vachiwedzera zvechokwadi!
Gwaro rangu rekupedza zvidzidzo kuGiriyedhi
Uprofita ihwohwo hwakandibatsira kuona zvaiva mberi. Pazvakaziviswa kuti gore raizotevera racho kwaizotangwa Chikoro cheGiriyedhi, ndakabva ndava nechido chekuva mumishinari. Muna 1943, ndakanzi ndinopayona kuPortland, Oregon. Mazuva iwayo taishandisa giramufomu kuridzira vanhu mharidzo padzimba dzavo, tobva tazovabvunza kana vaida mabhuku anotsanangura Bhaibheri aitaura nezveUmambo hwaMwari. Gore rose iroro rakapera ndichingofunga nezvebasa reumishinari.
Muna 1944, ndakafara kuti takakokwa kuGiriyedhi ini neshamwari yangu yepamwoyo Evelyn Trabert. Kwemwedzi mishanu, vadzidzisi vedu vakatiratidza kuti tinganakidzwa sei nekudzidza Bhaibheri. Takafadzwa nokuzvininipisa kwavo. Pane dzimwe nguva ndivo vaitoita basa rokutipa zvokudya pamatafura. Takapedza zvidzidzo zvedu musi wa22 January 1945.
BASA RANGU REUMISHINARI
Ini naEvelyn pamwe naLeo naEsther Mahan, takasvika kwatakanga tatumirwa kuEl Salvador muna June 1946. Takaona ndima iyoyo “yachenera kukohwa.” (Joh. 4:35) Nyaya yakaitika yataurwa patangira nyaya ino inoratidza kusvotwa kwakanga kwaitwa vatungamiriri vezvitendero. Vhiki rakanga rapfuura racho, takanga taita gungano redu redunhu rekutanga muSanta Ana. Takazivisa kuvanhu vakawanda nezvehurukuro yavose uye takafara zvikuru pakauya vanhu vanoda kusvika 500. Panzvimbo pekutyisidzirwa nezvavakaita, takabva tatoda kuramba tiri muguta iroro kuti tibatsire vane mwoyo yakatendeseka. Kunyange zvazvo vafundisi vakanga vaudza vanhu kuti vasaverenge Bhaibheri uye paine vashoma vaikwanisa kuritenga, vakawanda vaiva nenzara yekuda kunzwa chokwadi. Vaifadzwa nekuona tichiedza kudzidza chiSpanish kuti tikwanise kuvadzidzisa nezvaMwari wechokwadi, Jehovha, uye chipikirwa chake chekuti nyika ivezve Paradhiso.
Takatumirwa kuEl Salvador tiri vashanu patakapedza zvidzidzo zvedu kuGiriyedhi. Kubva kuruboshwe kuenda kurudyi: Evelyn Trabert, Millie Brashier, Esther Mahan, inini, uye Leo Mahan
Rosa Ascencio ndiye mumwe wevandakatanga kudzidza navo. Paakatanga kudzidza Bhaibheri, akabva asiyana nemurume waakanga achigara naye. Murume wacho akabva atangawo kudzidza Bhaibheri. Vakazochata, vakabhabhatidzwa, uye vakazova Zvapupu zvaJehovha zvaishingaira. Rosa ndiye akava mugari wemuSanta Ana wokutanga kuva piyona. *
Rosa aiva nekachitoro kaitengeswa magirosari. Paaienda muushumiri, aivhara chitoro chake achivimba kuti Jehovha aisazomusiya. Paaizodzoka achivhura chitoro chake, vanhu vaiita kudirana vachiuya kuzotenga. Akazvionera kuti mashoko aMateu 6:33 ndeechokwadi uye akaramba akatendeka kusvikira paakazofa.
Mupristi wemunzvimbo iyi akamboshanyira muridzi weimba yatairenda tiri vatanhatu akamutyisidzira kuti akaramba achiita kuti tirende imba iyi, iye nemudzimai wake vaizodzingwa muchechi. Murume uyu, uyo aiva muzvinabhizimisi akakurumbira, akanga agara achitosvotwawo nezvakanga zvichiitwa nevafundisi saka akaramba kutyisidzirwa. Akatoudza mupristi kuti akanga asina basa nazvo kunyange akadzingwa muchechi. Akatiudza kuti taigona hedu kuramba tichigara kusvikira patadira.
MUNHU ANOREMEKEDZWA ZVIKURU ANOVA CHAPUPU
Hofisi yebazi yakavakwa muna 1955
Muguta guru, San Salvador, mumwe mumishinari akanga achidzidza Bhaibheri nemudzimai wemumwe injiniya ainzi Baltasar Perla. Murume iyeye aiva nemwoyo wakanaka akanga asisatendi muna Mwari nekuti aiona unyengeri hwaiitwa nevafundisi. Pakanga pava kuda kuvakwa hofisi yebazi, Baltasar akazvipira kugadzira purani yezvivako zvacho uye kuzozvivaka, kunyange zvazvo akanga asati ava Chapupu.
Pashure pekushanda nevanhu vaJehovha pabasa rekuvaka iri, Baltasar akaona kuti akanga awana chitendero chechokwadi. Akabhabhatidzwa musi wa22 July, 1955, uye hapana kuzotora nguva mudzimai wake Paulina asati abhabhatidzwawo. Vana vavo vaviri vari kushumira Jehovha vakatendeka. Mwanakomana wake Baltasar, Jr., ava nemakore 49 achishanda paBheteri kuBrooklyn, achitsigira basa rekuparidza remunyika yose riri kuramba richingowedzera uye iye zvino ava muDare Rebazi rekuUnited States. *
Patakatanga kuita magungano muSan Salvador, Hama Perla vakatibatsira kuti tikwanise kushandisa imwe imba huru yaiitirwa maekisesaizi. Takatanga tichishandisa zvigaro zvishomanana; asi nekukomborerwa kwataiitwa naJehovha, gore negore tairamba tichiwedzera kusvika tava kutozadza imba yacho, tikatozopedzisira tisisakwane! Pamagungano iwayo aifadza, ndaisangana nevamwe vandakanga ndadzidza navo Bhaibheri. Chimbofungidzira kufara kwandaiita pavaindiratidza vanhu vavakanga vadzidzawo navo vainge vachangobva kubhabhatidzwa!
Hama F. W. Franz vachitaura nemamishinari pagungano
Pane rimwe gungano, imwe hama yakauya pandaiva ikati yaida kureurura. Handina kuiziva uye ndakashaya kuti yaida kutaura nezvei. Akati, “Ndakanga ndiri pakati pevakomana vakakupotserai matombo kuSanta Ana.” Iye zvino tose takanga tava kushumira Jehovha. Ndakafara zvekufara zviya. Izvi zvakanyatsondiratidza kuti basa renguva yakazara ndiro basa rine mubayiro wakakura kupfuura chero ripi zvaro ringaitwa nemunhu.
Gungano redunhu ratakatanga kupinda muEl Salvador
Ndakaita makore anoda kusvika 29, ndiri mubasa reumishinari kuEl Salvador; ndakatanga ndiri muguta reSanta Ana, ndikazoenda kuSonsonate, nekuSanta Tecla, uye ndikazopedzisira ndava kuSan Salvador. Muna 1975, pashure pekunyengetera ndichifungisisa, ndakasarudza kusiya basa rangu reumishinari ndikadzokera kuSpokane. Vabereki vangu vaishumira Jehovha vakatendeka vakanga vakwegura saka vaida kuchengetwa.
Baba pavakafa muna 1979, ndakasara ndichipepa amai avo vaiva neutano hwaingoramba huchiderera zvokuti vakanga vasisagone kuita zvinhu voga. Vakararama kwemamwe makore masere, vakazoshaya vava nemakore 94. Panguva iyi yakaoma, ndakasara ndaneta mupfungwa nemumuviri. Kushushikana mupfungwa uku kwakaita kuti ndirware neherpes. Asi ndakakwanisa kutsungirira dambudziko iroro nekuti ndainyengetera kuna Jehovha uye aiita seakandibata ruoko achindisimbisa. Zvaiita sekuti Jehovha aiti, ‘kusvikira wachena musoro ndichakutakura uye ndichakupukunyutsa.’—Isa. 46:4.
Muna 1990 ndakatamira kuOmak, Washington. Ndakabatsira zvekare mundima yechiSpanish uye vanhu vakati wandei vandakadzidza navo Bhaibheri vakabhabhatidzwa. Zvakanga zvava kundidhurira kuti ndirambe ndichigara muimba yangu yaiva muOmak saka muna November 2007, ndakatamira mufurati raiva muguta raiva pedyo reChelan, Washington. Ungano yechiSpanish yekuno yanga ichindichengeta kubvira ipapo, uye ndinozvitenda zvikuru. Sezvo ndirini ndoga Chapupu chakura, hama nehanzvadzi dzinotonditora saambuya vavo chaivo.
Kunyange zvazvo ndakasarudza kusaroorwa uye kusava nevana kuti ndikwanise kunyatsoita ushumiri “pasina kudzongonyedzwa,” ndine vana vakawanda musangano. (1 VaK. 7:34, 35) Ndaingozviudza kuti munyika ino handikwanise kuva nezvose. Saka ndakaita kuti kuzvitsaurira kwandakaita kuna Jehovha kuti ndimushumire nemwoyo wose kuve pekutanga muupenyu. Munyika itsva, tichange tava nenguva yakawanda yekuita zvinhu zvose zvakanaka. Rugwaro rwandinonyanya kufarira ndiPisarema 145:6, urwo runonyatsosimbisa kuti Jehovha achagutsa “zvinodiwa nezvinhu zvipenyu zvose.”
Kupayona kunoita kuti ndinzwe sekuti ndichiri muduku
Iye zvino ndava nemakore 91 asi utano hwangu huchiri nani hahwo zvekuti ndichiri kupayona. Kupayona kunoita kuti ndirambe ndichinzwa sendichiri muduku uye kunoita kuti ndive nechinangwa muupenyu. Pandakatanga kusvika kuEl Salvador, basa rekuparidza rakanga richangotanga. Pasinei nekuti Satani ari kuramba achingopikisa, munyika iyi mava nevaparidzi vanopfuura 39 000. Izvi zvakasimbisa kutenda kwangu zvechokwadi. Zviri kungooneka kuti mudzimu waJehovha uri kutsigira zviri kuitwa nevanhu vake!
^ ndima 4 Ona Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra1981 reChirungu mapeji 45 ne46.
^ ndima 19 Bhuku Regore ra1981 reChirungu mapeji 41-42.
^ ndima 24 Bhuku Regore ra1981 reChirungu mapeji 66-67, 74-75.